Lesona 9: Satana sy ireo mpiara-dia aminy roa
Hodinihina mandritra ny herinandro: Apok. 13
Tsianjery:"Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesôsy"- Apok. 12:17.
Catégorie : Lesona 9: Satana sy ireo mpiara-dia aminy roa
Resahin'ny Apôk. 12 antsika ny famelezana ataon'i Satana amin'ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky nandritra ny 1260 andro na taona (538-1798 TrK; vakio ny Apôk. 12: 6,13,14). Ny Apôk. 13 dia miresaka bebe kokoa momba ny famelezana ataony mandritra ny vanim-potoana samy hafa teo amin'ny tantaran'ny Kristianina. Hampiasa fahefana roa eto an-tany hanatanteraka ny asany i Satana amin'ny andro farany, fahefana izay asehon'ny Baiboly amin'ny alalan'ny bibidia. Miara-miasa izy ireo mba hanakanana ny drafitr'Andriamanitra hamonjena ny olombelona, ka miezaka maka ny fon'ny olona.
Tokony hitandrina fatratra isika raha eo am-panohizana ny fandinihana ireo toe-javatry ny andro farany. Ireo faminaniana efa tanteraka tamin'ny lasa no efa nodinihintsika hatreto. Manomboka eto kosa isika dia hijery bebe kokoa, na dia tsy izay ihany aza, ireo faminaniana izay mbola tsy tanteraka. Amin'ny alalan'ireny no anehoan'Andriamanitra amintsika ny toe-javatra hitranga amin'ny andro farany mba tsy hahatonga izany ho tampoka amintsika.
Tsy tokony hohadinointsika koa anefa fa na dia manambara izay hitranga amin'ny farany aza ireny faminaniana ireny dia tsy milaza ny fotoana sy ny fomba voafaritra hitrangan'izany toe-javatra izany. Tokony hitandrina isika, araka izany, tsy hamakafaka ankoatra izay ambaran'ny faminaniana amintsika. Aoka tsy hohadinointsika fa manana tanjona manokana ireo faminaniana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy: ny hampianatra antsika ny fomba tokony hiainantsika amin'izao andro izao sy mba hiomanantsika ho amin'ny hoavy.
Ny bibidia avy amin'ny ranomasina (Apok. 13:1-4,8)
Ny Apôk. 13:1-4,8 sy ny Apôk. 17:8 dia maneho amintsika ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Ahoana no nahatonga io biby io hiova tsy tahaka ny endriny tamin'ny voalohany, taty aoriana?
Nahita bibidia nivoaka avy tao amin'ny ranomasina i Jaona. Maneho fahefana ara-politika ny biby anankiray, ny filazalazana momba ny bibidia avy amin'ny ranomasina dia manondro fahefana iray izay sady ara-pivavahana no ara-pôlitika. Ny ranomasina dia tandindon'ny faritra be olona, be mponina any Eorôpa, toerana izay nandraisan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ny fahefana taorian'ny faharavan'ny fanjakana lehibe romanina (jereo ny Apôk. 17:15).
Manoritsoritra ilay biby i Jaona raha nivoaka ny ranomasina izany. Manan-doha fito sy tandroka folo izy, tahaka ilay dragona ao amin'ny Apôk. 12:3; maneho izany fa misy ny fifandraisana eo amin'izy roa tonta. Misy anarana fitenenan-dratsy eo amin'ny lohan'ilay biby, ary misy satroboninahitra eo ambonin'ny tandrony. Ny lohan'ilay biby dia ireo fahefana izay ampiasain'i Satana hanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny tantara (jereo ny Apôk. 17:9-11). Manondro ny anaran'Andriamanitra izay ambaran'ilay biby fa azy ilay anarana fitenenan-dratsy. Ny tandroka fob dia manondro ny Dan. 7:24, izay tandindon'ireo firenena nivoaka avy tao amin'ny fanjakana romanina taorian'ny naharavany. Manondro ny fahefana papalin'ny fanjakana romanina ireo toetra voalaza ireo.
Raha nivoaka tao amin'ny ranomasina ilay bibidia, dia tahaka ny leôparda sy bera ary liana no fahitana azy. Araka izany dia manambatra ny toetr'ireo biby efatra ilay bibidia (tandindon'ireo fanjakana lehibe efatra)izay ao amin'ny Dan. 7:2-7, dia i Babilona, Medianina sy Persianina, Grisia ary Rôma (Dan. 7:17). Navadik'i Jaona ny fitanisana ireo fanjakana ireo, izay maneho fa ilay bibidia avy amin'ny ranomasina dia mifandraika amin'ilay biby fahefatra ao amin'ny Dan. 7, dia ny fanjakana rômanina izany.
Nomen'ny dragona fahefana io biby io, ary koa seza fiandrianana sy fahefana lehibe. Tahaka ny nanomezan'ny Ray an'i Kristy ny seza fiandrianany sy ny fahefana (Apôk. 2:27), dia toy izany koa no anendren'ny dragona ilay bibidia ho mpanampy azy sy solontenany eto an-tany. Tian'i Satana haka ny toeran'i Jesôsy ao an-tsaina sy ao am-pon'ny olona io bibidia avy amin'ny ranomasina io.
Ny asan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina (Apok. 13:5-8)
Ny Apôk. 13:5 dia miresaka momba ny fotoana namelezan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ny vahoakan'Andriamanitra; naharitra 42 volana izany. Ny 42 volana dia mitovy amin'ilay 1260 andro izay anenjehan'i Satana ilay vehivavy ao amin'ny Apôk. 12:14. Efa nianarantsika fa sary an'ohatra anehoana ny fiangonana ny vehivavy. Ny "andro" koa ao amin'ny hafatra manokan'ny Baiboly momba ny andro farany dia sary an'ohatra: ny andro iray dia midika ho taona iray (Ezek. 4:6; Nom. 14:34). Ny taona 538 TrK no fiantombohan'ny 42 volana na 1260 andro (na taona ny marimarina kokoa). Tamin'izany fotoana izany dia ny fiangonana Kat6Iika rômanina no nanjary fahefana ara-pivavahana nifehy an'i Eorôpa nandritra ny Vanim-potoana Antenantenany. Taorian'izay dia narodan'ny Revolisiona frantsay ny fahefan'ny fiangonana Katôlika rômanina tamin'ny taona 1798 TrK. Ambaran'ny Baiboly amintsika izany toe-javatra izany ao amin'ny sary an'ohatra izay milaza fa voan'ny fery lalina izay saika nahafaty azy ilay bibidia, fery lalina izay mampiseho antsika ny fifaranan'ny fahefan'ny fiangonana katôlika rômanina nandritra ny fotoana voafetra.
Ampitahao ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ao amin'ny Apok. 13:5-8 sy ilay tandroka kely ao amin'ny Dan. 7:24,25. Vakio ny lehilahin'ota ao amin'ny 2 Tes. 2:2-12. Ahoana no itovian'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina sy Hay tandroka kely ary Hay lehilahin'ota?
Ny asa nataon'ilay bibidia nandritra ny 1260 taona teo amin'ny tantara dia maneho amintsika fa niady tamin'Andriamanitra izy ary nanao izay handrombahana ny fahefany. Fitenenan-dratsy no anarana manokana iantsoana izany fahotana nataony izany. Inona moa no atao hoe fitenenan-dratsy? Ao amin'ny TV dia azo adika ho filazana ny tena ho manam-pitoviana amin'Andriamanitra izany (Jao. 10:33; Mat. 26:63-65). Azo atao hoe fitenenan-dratsy koa ny fiezahana hanao tahaka an'Andriamanitra (Mar. 2:7). Hita tokoa fa meloka amin'ny fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Amin'ny fomba ahoana? "Ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra." - Apôk. 13:6. Aiza moa no fitoeran'Andriamanitra? Ao amin'ny fitoerana marina izay iasan'i Jesôsy amin'izao fotoana izao ho famonjena ny olony. Ataon'ilay bibidia izay hanilihana ny fahefan'i Jesôsy hamonjena ny olony. Amin'ny fomba ahoana no anaovany izany? Nosoloiny mpisorona olona i Jesôsy sy ny asany amin'ny maha-mpisoronabe antsika Azy, Izy izay mpitondra antsika feno fahamasinana. Lazain'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina fa sady afaka manavotra ny olombelona ireo mpisorona ireo no mamela heloka koa, zavatra roa izay Andriamanitra irery ihany no afaka manao izany.
Ilay bibidia avy amin'ny tany (Apok. 13:11)
Ny ampahany voalohany amin'ny Apok. 13 dia milazalaza ny amin'ny fiangonana Katôlika romanina tamin'ny Vanim-potoana Antenantenany, nandritra ny 1260 andro/taona. Azon'ny ratra mafy saika nahafaty azy izany rafitra ara-pivavahana miaro rafitra pôlitika izany vokatry ny toe-javatra nentin'ny Revôlisiôna frantsay. Sitrana ihany anefa izany fery izany taty, aoriana, ary niverina indray ilay rafitra. Ny ampahany faharoa amin'io toko io kosa dia miresaka ny amin'ny fomba hisehoan'ny fahasitranan'ilay fery saika nahafaty ilay bibidia.
Ahoana no ilazan'i Jaona ny fahefan'ilay bibidia faharoa ao amin'ny Apôk. 13:11? Avy amin'ny tany io bibidia faharoa io. Nahoana izany biby izany no nivoaka avy tamin'ny tany fa tsy tao amin'ny ranomasina? Vakio ny Apôk. 12:14-16.
Nahita bibidia iray hafa i Jaona, saingy avy ao amin'ny tany no nivoahany. Matanjaka tahaka ilay bibidia voalohany avy amin'ny ranomasina izany, kanefa samy hafa izy roa ireo. Mampahatahotra ny mijery ny endrik'ilay bibidia voalohany, ilay faharoa kosa tsy tahaka izany. Manana "tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry" izy (Apôk. 13:11). Ny zanak'ondry ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy dia sary an'ohatra ilazana an'i Jesôsy; koa milaza amintsika izany fa toa manana toetra tahaka an'i Jesôsy ity bibidia ity.
Ity fahefana ity, izay aseho ho tahaka ny zanak'ondry izay maneho fisakaizana amin'ny fiangonana, dia avy ao amin'ny tany izay niaro ilay vehivavy/fiangonana tamin'ny riaka nalefan'ilay dragona any amin'ny famaranana ilay 1260 andro ara-paminaniana (Apôk. 12:14-16). Tamin'izany fotoana izany dia azon'ny ratra mafy izay saika namono azy ilay bibidia avy amin'ny ranomasina, nandritra ny Revôlisiona frantsay. Izany no manambara amintsika fa io bibidia avy amin'ny tany io dia sary an'ohatra manondro ny fahefana eto an-tany amin'ny andro farany, dia ny firenen'i Etazonia izany.
Ambaran'ny Apôk. 13:11 amintsika fa tsy ho ela io fahefan'ny bibidia avy amin'ny tany io, izay tahaka ny zanak'ondry, dia hiteny tahaka ny dragona. Hataon'io bibidia io izay hiankohofan'ny olona rehetra eto an-tany eo amin'ny fahefan'ny bibidia avy amin'ny ranomasina. Maneho amintsika izany fa ilay firenena izay nanome toerana nialofan'ny fiangonan'Andriamanitra no hamely ny olon'Andriamanitra amin'ny andro farany.
Ny sarin'ilay bibidia (Apok. 13:12,13)
Ahoana no hanampian'ny 1 Mpanj. 18:38 sy ny Asa. 2:3 antsika hahatakatra ny famitahana ataon'ilay bibidia avy amin'ny tany ao amin'ny Apôk. 13:12,13? lnona no fitaka lehibe indrindra nataony?
Hamitaka ny olona ilay bibidia avy amin'ny tany ka hitaona azy ireo hino fa marina izay ambarany na dia tsy mifanaraka amin'ny Baiboly aza izany. Ahoana no hamitahan'ilay bibidia ny olona? "Amin'ny alalan'ny filalaovana angatra dia hisy fahagagana hatao, ny marary ho sitrana, ary betsaka ny zava-mahazendana tsy azo lavina ho vita." - HM, t. 613
Ny fahasitranan'ny fery saika nahafaty ilay bibidia avy amin'ny ranomasina dia manondro ny fiverenan'ny fahefana nananan'ny fiangonana katôlika romanina indray, tahaka ny tamin'ny Vanim-potoana Antenantenany. Miaraka amin'izay dia manomboka miteny tahaka ny dragona ilay bibidia avy amin'ny tany. Hanana ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina izy ary hanao tahaka izay nataony tamin'ny andro lasa. Tsy hamela ny olona hiankohoka amin'Andriamanitra araka izay iriny izy. Hiteny tahaka ny dragona amin'izay ilay bibidia izay hita ho toy ny zanak'ondry "sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibi-dia, izay voan'ny sabatra, nefa velona ihany." - Apôk. 13:14.Milaza amintsika io toko sy andininy io fa ny bibidia avy amin'ny tany dia tandindon'ny fitondram-panjakana izay ahitana vahoaka manana fahefana hanao lalana hifehezana ny taniny, dia i Etazonia izany.
"Inona ary ilay "sary ho an'ny bibidia"? (...) Mba hahafantarantsika ny endrik'izany sary izany ary sy ny fomba tokony hanaovana azy, dia tsy maintsy ianarantsika aloha ireo toetoetry ny bibidia, dia ny fahefana papaly izany.
"Niala tamin'ny fiangonana voalohany ny Fanahy sy ny herin'Andriamanitra rehefa simba noho ny fialany tamin'ny fahatsoran'ny filazantsara izy ary nanaiky ireo fomba amam-panao jentilisa. Nitady fanohanana avy tamin'ny fahefana tsy ara-pivavahana izy mba hifehezana ny feon'ny fieritreretan'ny olona.(...) Mba hanaovan'i Etazonia sarin'ny bibidia, dia tsy maintsy fehezin'ny fahefana ara-pivavahana toy izany ny fitondram-panjakana mba hampiasain'ny fiangonana ho amin'ny zava-kendreny koa ny fahefam-panjakana. "Rehefa tonga teo am-pelatanan'ny fiangonana ny fahefana tsy ara-pivavahana, dia nampiasainy hamaizana ireo niala tamin'ny foto-pinoany izany." - HM, t. 457.
Ny mariky ny bibidia (Apok. 13:16,17)
Vakio ny momba ny mariky ny bibidia ao amin'ny Apok. 13:16,17. Ny mariky ny bibidia no porofon'ny fahefany. Vakio indray ny Deo. 6:4-8. Miasa ho an'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ilay bibidia avy amin'ny tany, ataony izay hametrahana ny marik'io bibidia io amin'ny tanana ankavanana sy ny handrin'ny olona. Inona no ifandraisan'izany marika izany amin'ny lalan'Andriamanitra?
Hanery ny olona manerana izao tontolo izao ilay bibidia avy amin'ny tany, na ny mahantra na ny mpanan-karena, mba hanaiky ny mariky ny bibidia avy amin'ny ranomasina izay atao eo amin'ny tanana ankavanana sy eo amin'ny handrina. Tsy marika hita maso izany marika izany, koa midika Inona ary ny hoe manana ny marika eo amin'ny handrina na ny tanana ankavanana ny olona anankiray, raha tsy hita maso akory izany? Jereo ny Deo. 6:8. Hitanao ve fa nibaiko ny Isiraelita Andriamanitra mba hanao ny lalany eo amin'ny tanany sy ny handriny? Ny tanana dia sary an'ohatra hoenti-milaza ny fitondrantena, ary ny handrina maneho ny fisainana. Manampy antsika hahatakatra ny Apok. 13:16,17 ireo fanazavana ireo: handray ny mariky ny bibidia eo amin'ny tanany ny olona mba tsy hahatonga azy ho tratry ny famonoana. Ny hafa koa handray ny marika eo amin'ny handriny mba hanehoany fa miankohoka eo amin'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina amin'ny fony izy.
Natao hamelezana ny Sabata ny mariky ny bibidia avy amin'ny ranomasina. Maneho izany marika izany fa mametraka andro sandoka hiankohofana ho solon'ny Sabatan'i Jehôvah ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Inona no hitantsika amin'izao fotoana izao izay maneho fa tena miseho tokoa izany fiovana izany? Tsy Inona fa ny fivavahana amin'ny andro Alahady (vakio ny Dan. 7:25). "Ny fiankohofana amin'ny andro Alahady no mariky ny bibidia. Nanova ny Sabata ho amin'ny Alahady ny fiangonana katôlika (...) Amin'ny hoavy dia hisy lalana hatao izay manery ny olona hivavaka amin'ny andro Alahady. Koa ny hafatry ny anjely fahatelo dia hampitandrina ny olona tsy hiankohoka amin'ny fahefan'ny bibidia avy amin'ny ranomasina sy ny Sabata sandoka (...) Izay rehetra manohy manamasina ny andro Alahady dia handray ny mariky ny bibidia." Ev, tt. 234,235, (nasiana anamboarana).
Izao no ambaran'ny Apok. 13:18: "Indro ny fahendrena. Aoka izay manan-tsaina hanisa ny isan'ny bibi-dia, fa fanisan'olona izany; ary enina amby enim-polo amby enin-jato no isany." Iza ilay olona resahina etoana? Lazain'i Paoly fa "ilay lehilahin'ota" - 2 Tes. 2:3. Manondro ny fahefan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina izany anarana izany, izay tandindona hiantsoana ny fiangonana katalika romanina. Manana ny anarany voasoratra eo amin'ny handriny ilay bibidia avy amin'ny ranomasina, anarana izay maneho ny famelezana atao amin'ny lalan'Andriamanitra sy ny fiezahany hisolo tena ny Zanak'Andriamanitra ety an-tany.
Manambara arnintsika ny bokin'ny Apôkalipsy fa amin'ny fiafaran'ny tantara dia ny Sabata no ho fitsapana hanehoana amin'ny olona rehetra izay monina ety ambonin'ny tany izay tena mpanara-dia marina an'Andriamanitra. Tsy tokony hohadinointsika anefa fa tsy hoe manana ny mariky ny bibidia tsy akory ny olona izay mivavaka amin'ny andro Alahady amin'izao andro izao. Tsy ho ela, arnin'ny hoavy dia ny fivavahana amin'ny andro Alahady no ho mariky ny bibidia avy amin'ny ranomasina, ny fitandremana ny Alahady izay marika manokana maneho ny fahefan'ny bibidia. Amin'izany fotoana izany dia ho takatry ny olona mazava tsara ny hevitry ny fifidianana ny hiankohoka amin'ny andro Sabotsy na Alahady. Hanao safidy izy ireo avy eo na hanompo an'Andriamanitra na hanompo an'i Satana. Tsy mbola nitranga izany andro izany, fa amin'ny hoavy.
"Tsy mbola nisy nandray ny mariky ny bibidia, tsy mbola izao no andro fizahan-toetra antsika. Misy Kristianina marina any amin'ny fiangonana rehetra, anisan'izany ao amin'ny fiangonana kateilika romanina. Tsy mitsara ny olona noho ny amin'ny fihodinany amin'ny fahamarinan'ny Sabata Andriamanitra mandra-pahatakarany izany aloha sy hahafantarany fa tiany ny hanamasinan'izy ireo ny Sabata. Rehefa ho tonga kosa ny lalana izay hanery ny olona hiankohoka amin'ilay Sabata sandoka, dia hampitandrina ny olona ny hiak'ilay anjely fahatelo tsy hiankohoka amin'ny bibidia sy ny "andriamanitra sandoka" natao hanome voninahitra ny fahefany. Amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika ny fisarahan'ny vahoaka noho ny amin'ny fiankohofana marina sy sandoka. Ireo olona izay manohy mandika ny fahamarinana no handray ny mariky ny bibidia" - Ev, t. 234, (nasiana fanamboarana).
Tokony hotsaroantsika fa ny fitandremana ny Alahady amin'izao fotoana izao dia tsy midika fa very ny olona fray, ary ny fitandremana ny Sabata tsy mahavonjy ny olona iray hafa. Ho avy anefa ny fotoana, hanjary lohahevitra manan-danja indrindra ny "mariky ny bibidia", ary ny fifidianana ny andro fiankohofana no ho fizahan-toetra ny fahatokiana. Miantso ny vahoakan'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalipsy handray ny Baiboly Ica handinika ny faminaniana ho an'ny tenany, amin'ny fo mangetaheta fatratra, ary hanao ny ezaka rehetra hanatratra ireo izay tsy mbola an'i Kristy amin'ny alalan'ny filazantsara.
1. Raha mandinika ny toe-java-misy eo amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao ianao, Inona no fironana eo amin'ny tontolo ara-pivavahana sy ara-paitika izay toa mitarika ho amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana ao amin'ny Apôk. 13?
2. Raha eo am-piandrasana ny farany isika, manao ahoana no tokony ho toetsika manoloana ny Kristianina any amin'ny fiangonana hafa? Saintsaino ny amin'ity torohevitra ity: "Tokony hitady ny fomba hanatonana ireo mpitandrina any amin'ny fiangonana hafa ireo mpitandrina antsika. Mivavaka miaraka ho azy sy miaraka amin'ireo lehilahy izay anaovan'i Kristy fanelanelanana. Manana andraikitra lehibe izy ireo. Ny mpitondra hafatr'i Kristy dia tokony haneho fahalianana lalina sy vokatry ny fo amin'ireo mpiandry ondry ireo." - TFC, b. 6, t. 78. Ahoana no ataontsika mba tsy hanehoana toe-tsaina tsy maneho an'i Kristy eo amin'ny toetsika manoloana ireo Krisfianina any amin'ny fiangonana hafa? Manao ahoana no tokony hanehoantsika fanajana azy ireo sy ny finoany manokana kanefa tsy mametraka marimaritra iraisana eo amin'ireo foto-pinoantsika?